အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ၁ ကနေ ၁၀
အင်တာဗျူးတခုမှာတောင် ဂျူဝဲလ်က ပြောပါသေးတယ် သူ့ နဲ့ သူ့ယောက်ျား ရန်ဖြစ်ကြရင် သူ့ယောက်ျား က သူ့ ကို အမြဲပြောတယ်တဲ့ ၁၀ ထိ ရေနော် ၁၀ ထိရေ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲ့လိုပြောရင် ဂျူလ်ဝဲလ် က ပို စိတ်တိုတဲ့ ကြားက ပြုံးမိတတ်ပါသတဲ့။ ကဲ အဲ့တော့သူဘာ့ကြောင့် အဲ့လိုပြောတာလဲ သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာ....သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးနဲ့ တူတူ တီတို့ လဲ ခံစားကြည့်ကြရအောင်နော်......အခု ဒီ ပိုစ့်ကိုရေးနေရင်းနဲ့တောင် သူ့သီချင်းလေး ကိုဖွင့်ထားပါတယ်
စကားတခွန်း၊ အကြည့်တချက်ကတောင်၊ ဗုံးစာ ကို မီးတို့ လိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါပဲ.....
ခဏရပ်၊ သေချာတွေး မထွက်သွားခင် ၁၀ ထိရေတာကောင်းမယ်.....
၁... မင်းကို မုန်းချင်နေတုံးပဲ
၄... တံခါး ကိုရှာနေပြီ
၅... မင်း မျက်ဝန်းတွေထဲကို စိုက်ကြည့်ပြီး
၇... ခြေတလှမ်းလောက် နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်
၈... ၉ ... လောက်ရောက်တော့ ဘာလို့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာတောင် မသိတော့ပဲနဲ့...
၁၀...လဲရောက်ရော မင်းရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ကိုယ်ပြန်ရောက်နေပါရောလား....
၁... မင်းကိုယ့်ကို ခံစားစေနေနိုင်တုံးပဲ
၂... ၃... ကိုယ့်ကို ကြက်သီးမွှေးညှင်း ထစေနိုင်တုံးပဲ
၄... မင်းကိုယ့်ကို ပိုပိုပြီးတော့ လိုချင်စေနေတုံးပဲ....
၅...မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ထဲကို ကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့....
၆... မင်းက ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းပါ
၇...အဲ့တာက ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်မယ့် အမှန်တရားပါ
၈... ၉ ... ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိပေမယ့် အခေါက်တိုင်း အဲ့လို ပြန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်တော့ ဘုရားသခင် ကို ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၁၀ ရောက်တဲ့ အခါတိုင်း ....
၁၀ ရောက်တဲ့ အခါတိုင်း....
တကယ့်လို အစကနေပြန်ရွေးရမယ် ဆိုရင် လဲ မင်းကိုယ်ပဲ ကိုယ် အခါ တသောင်း ပြန်ရွေးမိမှာပဲ....
Eight, nine, I don't know why,
အော်ရီဂျင်နယ် အမ်တီဗီ လေးလဲကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်...
Posted by တီချမ်း at 4:14 PM
ကြိုက်လို့ ထပ်တလဲလဲနားထောင်နေမိတယ်..... Thanks !
ချစ်ကြည်အေး August 3, 2011 at 9:29 PM
သူ့ကို Foolish Gamesကတည်းက ကြိုက်တာ :))
တီချမ်း August 3, 2011 at 11:54 PM
မိုးခါး August 4, 2011 at 2:55 PM
အရမ်းကြိုက်သွားဘီ ..း)) နားမထောင်ဘူးဘူး ..း) ရှဲ့ရှဲ့ ရှာဦးမယ် :D